အလှအပ ရေးရာ Archives - Online Hartha
ဗောက်ပျောက်စေတဲ့ ကိုယ်တွေ့နည်းလမ်း ကျနော် ဘောက် ဖြစ်နေတာကြာပြီး ဘောက်ပျောက်ခေါင်းလျှော်ရည် အစုံသုံးကြည့်ပါတယ် ။ ရှောက်နူသီး/သံပုရာသီးစသည်နည်းလမ်းများဖြစ် လုပ်ကြည့်ပေမယ့် တစ်ဖက်နိုင်ငံရောက်ကတည်းက နေပူမိုးရွှာ မရှောင် ပန်ရံအလုပ်ဖြစ်ပြီး ၂နှစ်တာ လုပ်ကာ ဂျွတ်စွဲနေသည် ။ ကျွန်တော် ခေါင်းကဘောက်တွေက မပျောက်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ညစ်ခဲ့တာပေါ့ ဒါနဲ့ကတုံးခနခနတုံး နေရတာပေါ့ ကတုံးတုံးပြီး ဆေးနည်းအစုံသုံးကြည့်တော့လည်း ဆံပင်ပြန်ပေါက်တာနဲ့ပြန်ထနေတာလေး မပျောက်ခဲ့ပါဖူး တစ်ည ဘောက်ပျောက် နည်းဆိုပြီး ကျွန်တော်တွေ့ လိုက် ပါတယ် ။ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် တင်ထားတဲ့ ရဲယိုသီးနည်းလေး သိခဲ့ သည်မို့ အထူးအဆန်းလေးမို့ စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ ကျွန်တော် လဲလုပ် ကြည့်တယ် ။ ပထမ တစ်လုံးမှာဘောက်တွေ ထလာသည်မို့ ယုံကြည်မှု့နည်းလာပါတယ် ဇွဲမလျော့ ပဲနောက်တနေ့ထပ် … Read more
လက်ဆစ်၊ခြေဆစ်တွေ မဲနေလို့ စိတ်မညစ်ရအောင်…
လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့လျော့နေပြီလား။ မျက်နှာလေးကတော့ဖြူဝင်းနေပေမယ့် လက်ချောင်းလေးတွေ ညိုမဲနေရင်းလည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ မျက်နှာကိုပဲ ဂရုစိုက်ရုံနဲ့ အလှအပဟာ ပြီးပြည့်စုံမှု မရှိနိုင်ပါဘူး …။ လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေညိုမဲနေပြီး လက်သည်းနီခြေသည်းနီ လှလှလေးတွေ ဆိုးထားပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်လက်ချောင်းလေးတွေက လှပနေမှာ မဟုတ်သလိုယုံကြည်မှုတွေလည်း ပိုတိုးမလာတာတော့ သေချာပါတယ် …။ နေလောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေ ညိုမဲနေတာတွေအတွက် သံပုယိုသီးကို အသုံးပြုလိုက်ပါနော် …။ အသုံးပြုနည်းကတော့ – သံပုယိုသီးနဲ့ သကြား သံပုယိုသီးနဲ့ သကြားကို လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေမှာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ …။ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ သံပုယိုသီး တစ်ခြမ်းကိုအရည်ည်ပြီး ပွတ်တိုက်ပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ပြီးရင် ၅ မိနစ်လောက်ထားပြီး ရေဆေးချပါ။ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်၂ ပတ် … Read more
အဆီပွနျလှနျးလို့ စိတျဆငျးရဲနရေတယျဆိုရငျ ဒီ(၈)ခကျြကို လုပျကွညျ့ပါ….
အဆီပြန် လွန်းလို့ စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုရင် ဒီ (၈) ချက်ကို လုပ်ကြည့်ပါ သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်း တွေလည်း ရှိသေးတယ်။ မျက်နှာ အဆီပြန် လွန်းလို့ လူဆီထုတ်ပြီးတော့သာ ရောင်းပလိုက်ချင်တော့တယ်”လို့များ ညည်းညူလိုက်ရတော့မလားပဲနော်။ တကယ်ပါ မျက်နှာ အဆီပြန် ပုံများကတော့ အိပ်ရာနိုး လည်းအဆီတဝင်းဝင်း၊ မိတ်ကပ် လိမ်းထားလည်း အဆီလေး တဝင်းဝင်းနဲ့။ ဒီလို အဆီပြန် တဲ့ဒုက္ခကို ရင်ဆိုင်ဖို့ကတော့ မျက်နှာသစ် တာအစ အစားအသောက် အဆုံး အားလုံးကို ဂရုစိုက်ပေးမှ တော်ကာကြပါလိမ့်မယ်နော်။ အဆီပြန် လွန်းလို့ စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုရင် ဒီ (၈) ချက်ကို လုပ်ကြည့်ပါ ၁။ မျက်နှာသစ် ရင် မျက်နှာသစ် တဲ့အခါ ရေနွေးနွေး လေးကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ ချွေးပေါက် ပိတ်တာကိုလည်း ရှင်းပေးနိုင်တော့ … Read more
၃ ရကျအတှငျး မကျြနှာပျေါက အမညျးစကျတှကေိုပြောကျစမေယျ့ လြှို့ဝှကျနညျးတဈခု
June 12, 2021 by Online Hartha
မိနျးကလေးမြား ဆံပငျဖွောငျ့တဲ့အခါ သတိထားစရာမြား
June 11, 2021 by Online Hartha
မိန်းကလေးများ ဆံပင်ဖြောင့်တဲ့အခါ သတိထားစရာများ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆံကေသာ အလှ ဟာ နဂိုကောင်းတာကြောင့် ဆိုတာထက် ဆံပင် ကို သူဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပေးသလဲ ဆိုတာနဲ့ ပိုသက်ဆိုင် ပါတယ်။ ဆံပင်ဆိုတာ ဘာအရေးကြီးလို့လဲ ဆိုသူတွေကို ပြောချင်တာက ဆံပင်ဟာ လူတစ်ယောက် အတွက်တော့ ဒုတိယ မျက်နှာပါပဲ။ ဆံကေသာ အလှ လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဆံသားရဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းလှပမှု အပြင် ဆံပင်ပုံစံကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားကြ ရပါ တယ်။ကမ္ဘာအနှံ့က တချို့သောအမျိုးသမီးတွေက လှပသန်စွမ်းပြီး နူးညံ့တဲ့ ဆံပင် အပြင် သူတို့နဲ့ လိုက်ဖက်မယ်ထင်တဲ့ ရှည်ပြီးဖြောင့်တဲ့ ဆံပင်ရဖို့ စိတ်ကူးယဉ် ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဆံပင်အဖြောင့်ကို ကြိုက်တာလဲ ကြည့်ကြည့် ရအောင်။ အမျိုးသမီးတွေက ဆံပင်ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ မွေးဖွားလာ ကြတာပါ။ … Read more
ဓာတုပစ်စညျးတှမေသုံးပဲ သဘာဝ ရှားစောငျးလကျပတျနှငျ့ အသားဖွူအောငျလုပျနညျး
ဓါတုပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီး အ သားဖြူအောင် လုပ်မှာ ထက်စာရင်တော့ သဘာဝနည်း ကို သုံးပြီး ကြိုးစားကြ ည့်တာက ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ အသုံးပြုရမယ့် ပစ္စည်း ကလည်း တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါ။ ရှားစောင်းလက် ပတ်ကို အသား ဖြူဖို့အတွက် ဘယ်လို မျိုး အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ (၁)ရှားစောင်းလက်ပတ် တစ်မျိုးတည်းကို သုံးပြီး ဖြူအောင် လုပ်နည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲပါ။ ပြီးရင် ဂျဲလ်ကို ထုတ်ပြီး ဇွန်း(သို့) ခရင်းနဲ့ ခြစ်ထုတ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ မျက်နှာမှာ လူးပေးပြီး(၁၀)မိနစ်ကြာအောင် ထားပေး ပါ။(၁၀)မိနစ်လောက် ပြည့်ရင်တော့ ရေအေးနဲ့ ဆေးချပါ။ ဒီနည်းကို တစ်ရက်မှာ နှစ်ကြိမ်လောက်၊ အချိန် မရဘူးဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး တစ်ပတ်မှာ ငါးကြိမ်ေ လာက်တော့ … Read more
ကွကျဥအကာ အသုံးပွုနညျး လြှို့ဝှကျခကျြလေးမြား
အဆီအရမ်းပြန်နေရင်… အဆီတွေ အရမ်းပြန်တတ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရဲ့ အလှကို ဖျက်စီးတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီမျက်နှာပေါ်က အဆီတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေရှင်းလို့ ရပါတယ်။ အမြုပ်ထအောင် လုပ်ထားတဲ့ ကြက်ဥအကာထဲကို အုတ်ဂျူံ နဲ့ရောပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ mask လိုမျိုးလေး လိမ်းပြီးတော့ မိနစ်အနဲငယ်ထားပြီး ရေအေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ မျက်အိပ်တွေ ရောင်နေခဲ့ရင်… တချို့တွေက မျက်အိပ်ရောင်နေလို့ ဆိုပြီး ပစ္စည်းတွေကို ဈေးတွေ အများကြီး ပေးပြီး ဝယ်သုံးကြတာ ကို တွေ့ကြရပါတယ်။ တကယ်တော့ အိမ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူရတာကို သူတို့ သတိမထားမိလို့ပါ။ ငွေလဲ မကုန်ဘူး၊ လုပ်ရတာလဲ လွယ်တယ်…. စတဲ့ အားသာချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ကြက်ဥအကာကို မျက်အိပ်ပေါ်မှာ လိမ်းပြီး ခြောက်အောင်ထားပြီး ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ဆေးချပါ။ တစ်ရက်ခြား … Read more
လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီး ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းတဲ့ တင်းတိပ်ပျောက်ဆေး တင်းတိပ်ဆိုတာ မျက်နှာ အသားကို နေပူလောင်တာ၊မီးပူမိတာက စတာပါ “.. ” မီးအပူနဲ့ ချက်ရ ၊ ပြုတ်ရတာတွေလည်းပါတာပေါ့” သုံးရမှာက အိမ်မှာ ငွေလည်းမကုန် ၊ လွယ်လွယ်နဲ့ ရတဲ့မီးဖိုချောင်ထဲက မြန်မာ့ တိုင်းရင်းဆေး ပစ္စည်း မကျည်းသီးမှည့် ပါဘဲ ။ ကျွန်တော် အဲဒီနည်းကို အမကြီးတွေ ၊ ညီမတွေကို ပေးပြီး စမ်းသပ်ခိုင်းတာ ဆယ်ရက် – ဆယ်ငါးရက်အတွင်း သိသိသာသာ ပျောက်သွားတာတွေကိုမျက်မြင် တွေ့ရလို့ မျှဝေပေးတာပါ ။ ဆေးနည်း ၁ ။မကျည်းသီးမှည့် နည်းနည်းကို ခွက်တစ်ခုထဲမှာရေ နဲနဲထည့်ပြီး ပုံထဲက အတိုင်း မပျစ် မကျဲလေး ဖျော်ထားပါ ။ ၂ ။ … Read more